Shina: Mahatsiaro an’i Hu Yaobang ny praiminisitra Wen · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Avrily 2019 3:06 GMT
Tamin'ny taratasy misokatra nivoaka ny Alakamisy tao amin'ny People’s Daily, nampahatsiahy ny dia nahafinaritra niaraka tamin'ny praiminisitra teo aloha Hu Yaobang nogadraina sy nalàna baraka ny praiminisitra Shinoa Wen Jiabao. Mahatsiaro ny faha-21 taona nahafatesany ilay taratasy.
Tsy maneho fotsiny ny fitiavana sy ny fanajana an'i Hu ilay taratasy, fa mijoro ho toy ny fampahatsiahivana mazava ho an'ny tanora Shinoa mpitarika mba tsy hanapaka ny fifandraisana amin'ny vahoaka sy ny zava-misy ao amin'ny firenena amin'ny lafiny lehibe indrindra.
Nohazavain'i Wen ao amin'ny taratasiny ny antsipiriany lehibe momba ny teknikan'ny fanadihadiana eny ambanivohitra nataon'i Hu. Mamaritra ny fitsidihana niarahan'ireo mpitarika roa natao tao an-tanàna atsimo andrefana, Xingyi tamin'ny taona 1986 ilay taratasy. Manamafy hatrany ny fifandraisan'i Hu amin'ny olon-tsotra ho toy ny fomba fitantanana mety.
Nesorina tamin'ny asany maha-praiminisitra i Hu tamin'ny volana Janoary 1987, nandritra ny fiakaram-bidim-piainana sy ny fitroarana nandritra ireo taona voalohany nanaovana fisokafana sy fanavaozana. Nahita ireo mpitarika mpandala ny nentin-drazana toa an'i Chen Yun sy Deng Liqun fa toy ny fandrahonana ny foto-kevitra izay nametraka ny antoko ho ara-dalàna ny fahalalahana ara-toekarena najoron'i Hu .
Nitarika fisaonana sy fihetsiketsehana goavana ny fahafatesan'i Hu tamin'ny 15 aprily 1989, izay niteraka ny Fihetsiketsehana ao amin'ny Kianjan'i Tiananmen. Na dia tiam-bahoaka aza i Hu, dia efa nampifandraisina tamin'ny fahaverezana endrika goavana tao amin'ny antoko hatramin'ny Revolisiona Ara-kolontsaina.
Nahazo valiny mahatalanjona avy amin'ny vahoaka ny taratasy nalefan'i Wen. Nitatira ny New York Times fa efa 20,000 mahery ny valin-teny ao amin'ny aterineto tao anatin'ny andro namoahana azy.
Manambara ny maha-zava-dehibe ilay taratasy tao amin'ny Shina ankehitriny ilay bilaogera Yao Keming .
Sarotra ny mamaky lahatsoratra tsotra, manan-danja ary marina izay nosoratan'ny manampahefana iray tao amin'ny gazety iray misokatra.
Ao anatin'ny ambaratongan'ny governemanta Shinoa sy ny biraon'ny antoko, matetika raisina ho mpitarika tokana mifandray amin'ny olon-tsotra i Wen. Ho setrin'ny taratasiny, naneho izany fahatsapana izany ilay bilaogera mitondra ny anarana hoe ‘Freedom’.
Saribakolin'ny politika Shinoa ny China Daily. Amin'ny maha-mpitarika ara-politika azy, miavaka amin'ireo mpitarika rehetra i Wen Jiabao, indrindra nandritra ny horohorontany tao Wenchuan [Sichuan], indrindra koa mandritra ny hain-tany ao Guizhou amin'izao fotoana izao, ary indrindra indrindra eo anilan'ireo vahoaka ao anatin'ny fahantrana.
Na izany aza, tsy dia fandinihana loatra momba ireo andro taloha ny taratasin'ny Praiminisitra Wen fa antso fifohazana kokoa manoloana ny fitomboan'ny hantsana eo amin'ny mpitarika sy ny olon-tsotra. Efa hatrizay tahaka ny Repoblikam-bahoaka ao Shina ny fomba fanao amin'ny famoahana lahatsoratra amin'ny alàlan'ny gazety toy ny People's Daily.
Raha ny tena marina, ny ankamaroan'ny korontana nitarika ny fanagadrana an'i Hu dia hita taratra tamin'ny fanehoan-kevitra nivoaka tao amin'ny People's Daily, ny Beijing Daily, ary ny Xinhua News nandritra ny faramparan'ny volana 1986. Tamin'ny taona 1992, natao hampahatsiahy ny filoha Jiang Zemin ny fitazonana fahefana ataon'ilay mpitarika efa hisotro ronono ny lahatsoratra navoakan'i Deng Xiaoping tao amin'ny People's Daily.
Mandray ny hafatra nalefa tao amin'ny taratasin'i Wen ilay bilaogera Mo Ce.
Ny fifandraisana lalina amin'ny vahoaka no iray amin'ireo fomba fiasa lehibe ataon'ny antokonay. Raha mipetraka mandritra ny tontolo andro ao amin'ny birao mihaino vaovao isika, dia maro amin'ireo toe-javatra no mety ho tsy marina, na hosoka mihitsy aza.
Mo Ce mitanisa ny famaranana ny taratasin'i Wen.
Rehefa avy namaky ny tantaram-pahatsiarovan'ny praiminisitra Wen Jiabao mikasika ny dian'i Hu Yaobang tany amin'ny faritra atsimo andrefana, dia fintiniko amin'ny fehezanteny vitsivitsy izany, izay hoe “tsy maintsy ataon'ny mpitarika ny mandeha matetika eny anivon'ny vahoaka, mandeha any amin'ny ambaratonga fototra sy mitarika fanadihadiana sy fikarohana, fandinihana sy tafatafa, ary mametraka fifandraisana akaiky eo anelanelan'ny saranga ambony sy ambany, eo anelanelan'ny rafi-pitarihana sy ny vahoaka marobe. Amin'izany fomba izany ihany no ahafahana manangana tontolo tsara, mamorona tanjaka lehibe eo amin'ny toetra, manampy amin'ny fanatontosana ny fitarihana mety, mampihena ny fahadisoana amin'ny asan'ny mpitarika, manatsara ny fahaiza-mitarika, ary manafaingana ny fitomboan'ny mpitarika tsara–indrindra ireo tanora mpitarika.”